अनुहारको दागदब्बा र चाँयापोतो हटाउन निमको जुस
Homeसमाचारअनुहारको दागदब्बा र चाँयापोतो हटाउन निमको जुस
March 20, 2021 admin समाचार 3383
निमको स्वाद अत्य’धिक तितो हुन्छ । यसमा क्याल्शियम, आइरन, एन्टिअक्सिडेन्ट, एन्टिब्याक्टेरियल तत्वहरु पाइनछन् । विशेषगरी मोटोपनका कारण चिन्तामा रहेका व्य’क्तिहरुका लागि निमको जुस फाइदा’जनक हुन्छ ।
यसले रोग प्र’तिरोधात्मक क्षमतामा पनि वृद्धि गर्छ । मोटोपनका कारण समस्यामा रहेका व्यक्तिहरु’का लागि निमको जुस पिउँदा तौल कम गराउँन मद्दत गर्छ । निमको जुस घरमा नै बना’उन सकिन्छ ।
कागती’को रस (स्वादअनुसार)
१. नि’मको पात सफा गरेर रातभर भिजाउने
३. तयार भएको पेस्टमा १ लिटर पानी र का’गतीको रस मिसाएर छान्ने र बोतलमा राख्ने
४. उक्त जुस २ देखि ३ दिन’सम्म पिउन सकिन्छ ।
हरेक दिन नि’मको जुसले पेट, कम्मर जस्ता अंगमा लागेको बोसो पगाल्न मद्दत गर्छ । यसले तौल कम गर्ने र शरीरलाई फिट बनाउँछ ।
नियमित रुपमा निम’को जुस सेवन गर्दा क्यान्सर जस्ता बिरामीहरुबाट बचाउँछ । एन्टि ब्याक्टेरियल, एन्टिभाइरल जस्ता गुण पाइने भएकाले रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउँछ । निमको जुसले कम’जोरी हराउँछ र दिनभर ताजा र उर्जा’वान महसुस गराउँछ ।
बच्चाहरुको पेटमा वि’भिन्न प्रकारका किराहरु परेमा निमको दुई थोपा रस पिलाउँदा पेटमा भएका समस्या’हरु कम हुन्छ । यसले रक्तसञ्चार सन्तुलनमा ल्याउँछ । भने यसले रगत पनि सफा गराउँछ । निमको जुसको सेवनले अनु’हारको दागदब्बा, चाँयापोतो, चाउरीपन र डार्क सर्क’ल कम गराउँछ ।
निमको पात क्या’ल्सियम र आइरनको मुख्य स्रोत भएकाले मांसपेशी र हड्डीहरु मजबुत बनाउँछ । दाँतको दुखाई कम गर्न पनि निमको जुस फाइदाजनक हुन्छ । निमको पातले कपाल प’खाल्दा कपाल रुखो हुने सम’स्या कम हुन्छ । – रातोपाटीबाट
स्टेजमै जजले बे’इज्जत गरे पछि कल्पना दाहालले पहिलो पटक दिइन् यस्तो प्रतिकृया (भिडियो हे’र्नुहोस्)
माझी बस्ती बि’वादको बारेमा श्वेता खड्काले मुख खोलिन् “ठगेको भए जुत्ताको माला लगाउनुस” (भिडियो सहित)
February 12, 2021 admin समाचार 4214
नायिका श्वेता खड्काले आफ्नो’ पहलमा सिन्धुपाल्चोकको झ्याँडीमा निर्मा’ण भइरहेको एकिकृत वस्तीको बारेमा आएका समाचारहरु सत्य नभएको भन्दै त्यसको खण्ड’न गरेकी छिन् । आज सामाजिक संजाल फेसबुकमा लामो स्टा’टस लेख्दै उनले माझी बस्तीका केही ब्यक्तिहरुसँग लिएको
आँचल शर्माले भनिन्: “सबैको सपना मेलम्चीले ब’गाएको छ”
June 18, 2021 admin समाचार 2703
बाढी प्र’भावित सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्चीका बासिन्दालाई सघाउन सेलेव्रिटी पनि सक्रि’य भएका छन् । नायिका आँचल शर्माको टोलीले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा मंगलबार गएको बाढी पहि’रो पि’डित ५० परिवारलाई राहत सामाग्री वि’तरण गरेकी छिन् । राहत वितरण’को लागि
नर्स रहेकी छोरीको मृ’त्यु, श्रीमती शैयामा, आफै संक्रमित रहेका उनी श्रीमती बचाउन अस्पतालमा भौँ’तारीदै (भिडियो हे’र्नुहोस)
April 24, 2021 admin समाचार 3515
स्टाप नर्स रहेकी सुत्के’री छोरी गुमा’ए । उनको ३ महिनाको सानी छोरी छ । श्रीमती पनि सं’क्रमित भएर अस्पतालमा उप’चारार्थ छन् । आफै पनि सं’क्रमित रहेका दांग तुलसीपुरका सन्तोष वली अस्पतालमा भौता०’रिएका छन् । उनी